Stocker Seza - Famolavolana
Seza Ny Stocker dia famonoana eo anelanelan'ny seza sy seza. Ny seza vita amin'ny jiro vita amin'ny maivana dia mety ho an'ny tranobe manokana sy semiofficial. Ny endrika endriny dia manasongadina ny hatsaran'ny hazo eo an-toerana. Ny famolavolana sy fananganana ifotony mahomby dia mamela azy io miaraka amin'ny savaivony matevina 8 mm 100 100 isan-jaton'ny hazo matevina hamorona lahatsoratra matevina nefa maivana 2300 Gramm ihany. Ny fanamboarana ifoton'ny Stocker dia mamela ny fitahirizana toerana. Mifikitra amin'ny tsirairay avy izy io, mora azo tehirizina mora ary noho ny famolavolana mivoatra dia afaka manosika tanteraka ao ambanin'ny latabatra iray i Stocker.
Anaran'ny tetikasa : Stocker, Anaran'ny mpamorona : Matthias Scherzinger, Anaran'ny mpanjifa : FREUDWERK.
Seza Matthias Scherzinger Stocker